Nianjera teo enelanelan’i Tsaratanàna sy Andriamena: potika ilay helikoptera, nieren-doza ireo olona 5 tao anatiny | NewsMada
Nianjera teo enelanelan’i Tsaratanàna sy Andriamena: potika ilay helikoptera, nieren-doza ireo olona 5 tao anatiny
Ny lehiben’ny faritra Betsiboka, ny kaomandin’ny vondrontobim-paritra sy ny kaomandin’ny kaompanian’ny zandary ao Betsiboka sy Tsaratanàna, ary ireo mpanamory roa lahy. Ireo no tao anatin’ilay helikoptera tra-doza ka nianjera, omaly maraina, tao anelanelan’i Tsaratanàna sy Andriamena. Nieren-doza izy 5 mirahalahy, ary efa manaraka fitsaboana etsy amin’ny Homi, hatry ny omaly.
Nianjera omaly, tokony ho tamin’ny 10 ora maraina tao Anadabo, kaominina Isinko, distrikan’i Tsaratanàna, teo anelanelan’i Tsaratanàna sy Andriamena, ny angidimby an’ny miaramila nitondra ireo tampon’andraikitra any amin’ny faritra Betsiboka. Olona dimy naratra tamin’izany, izay nahitana ny lehiben’ny faritra Betsiboka, Kaomandin’ny vondrontobim-paritra Betsiboka sy Tsaratanàna ary ny mpanamory roa lahy avy ao amin’ny Bani. Nentina niakatra taty an-dRenivohitra tamin’ny alalan’ny helikoptera ireo naratra ireo. Nentina teny Betongolo ary naiditra hopitaly eny amin’ny Homi Soavinandriana.
Namita iraka mikasika ny fanentanana ny mponina hifanome tanana amin’ny manampahefana rehetra, hiatrehana ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana izy ireo. Ity angindimby ity izay nalefa mba hanamora ny hetsika hanavotana ilay mpitsabo mpanampy nisy naka an-keriny tany an-toerana. “Niasa avy hatrany ny fitondrana manoloana ny antso natao azy ireo. Nampiasana tamin’izany ity helikaoptera ity. Tsara ny manamarika fa tsy notifirin’ny dahalo akory izy io fa mety ho olana ara-teknika. Eo am-panaovana ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana”, hoy ny SEG, ny jly Ravalomanana, omaly.
Angidimby iray hafa…
”Tsy mamela ny mpitandro filaminana ho irery ny fitondram-panjakana fa raha vao nandre ny tatitra mahakasika izany ny Filoham-pirenena, nanome angindimby iray hafa mba hamonjena ireo maratra ireo ary nankahery sy nampirisika hatrany ny tampon’andraikitra mba hanohy hatrany ny asa fikarohana ireo jiolahy. Andriamatoa praiminisitra ihany koa moa nanambara fa hanampy ireo mpitandro filaminana amin’ny fampitaovana, toy ny angindimby hanohizan’izy ireo ny asa”, hoy ny fanazavana.
”Nisy ny fakana an-keriny mpitsabo mpanampy iray tao Manakana ka na tsy misy aza ny fifandraisana tamin’ireo fianakavian’ny nalaina an-keriny noho ny tahotr’izy ireo sy ho fitsinjovana ny ainy, nanao ny fikaroham-baovao eny anivon’ny fiaraha-monina ny mpitandro filaminana”, hoy ny fanazavana. Ity mpitsabo mpanampy ity izay nangatahan’ireo olon-dratsy vola teo amin’ny 80 tapitrisa Ar teo, saingy mbola tsy voaloha izany. Mbola tsy votsotra izy io noho izany.
”Miasa 24ora/24ora ny mpitandro filaminana, ahitana zandary sy tafika, ary hanehoana amin’ireo jiolahy ireo fa mitohy ny haza lambo atao amin’izy ireo satria tsy ho ekena velively ny fampijaliana ampiharin’izy ireo amin’ny mponina”, hoy ny fanamafisana. Nisy ny zandarin’ny FIGN avy aty Antananarivo nalefa tany an-toerana. Mitohy ny fikarohana.